Umaki: netra | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 12, 2017 NgoLwesibili, ngoJulayi 11, i-2017 Douglas Karr
INetra iyisiqalo esakha ubuchwepheshe bokwamukelwa kwezithombe okususelwa ocwaningweni lwe-AI / Deep Learning olwenziwe eMIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Isoftware yakwaNetra iletha ukwakheka ezithombeni ebezingahlelwanga phambilini ngokucaca okumangazayo. Ngaphakathi kwama-millisecond angama-400, abakwaNetra bangamaka isithombe esiskeniwe sama-brand logo, isimo sesithombe, nezici zobuso bomuntu. Abathengi babelana ngezithombe eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-3.5 ezinkundleni zokuxhumana nsuku zonke. Ngaphakathi kwezithombe ezabiwe emphakathini kunemininingwane ebalulekile ngemisebenzi yabathengi, izintshisekelo zabo,